मोजाको भकुण्डो खेल्दै सहारा, आहा ! रारा गोल्ड कप र सहारा एकेडेमिसम्म आयौं :विक्रम थकाली(video) – Online Annapurna
मोजाको भकुण्डो खेल्दै सहारा, आहा ! रारा गोल्ड कप र सहारा एकेडेमिसम्म आयौं :विक्रम थकाली(video)
२४ माघ २०७६, शुक्रबार १०:२१ February 7, 2020 731 Views
हाम्रो लक्ष्य सार्क स्तरीय फुटवल खेलाउने हो
उ बेलामा टालोको भकुण्डो बनाएर खेलियो । कहिले मोजाको भकुण्डो बनाएर खेलियो । त्यो बेलामा क्षेत्रीय खेदलकुदले आयोजना गरेको रारा कप मेरै नेतृत्वमा खेल्न साथीभाई दाजुभाईको कुरा भयो । म त्यो बेलामा निकै राम्रो फुटवल खेल्थें । त्यहि भएर होला मैले क्याप्टेनसिपको जिम्मेवारि पाएँ र खेलमा हाम्रो टीमले राम्रो सफलता पनि प्राप्त गर्यो । त्यो सफलताले हामीलाई केहि गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो र २०५५ सालमा अग्रज, अविभावक वसन्त थकालीको नेतृत्वमा सहारा क्लवको विधिवत जन्म भयो ।
तत्कालिन अवस्थामा वसपार्क क्षेत्र अव्यवस्थित थियो । वसपार्क भन्ने बित्तिकै मान्छेको एक खालको हेर्ने दृष्टिकोण हुने रहेछ, जसलाई हामीले समाजमा देखिने काम गरेर परिवर्तन ल्याउन चाहन्थ्यौं । ७५ वटै जिल्लाका मानिस आउने जाने सेन्टरलाई अलि राम्रो गरौं, सामाजिक काम गरौं भन्ने जोश पलायो । पारिपट्टिबाट वरिष्ठ फोटो पत्रकार सुदर्शन दाईको क्यामरा तर्सिएपछि सुरुक्क नतिजा आउने काममा लाग्न प्रेरणा मिल्दै गयो । चौरमा बसेर हामीले उ बेलामा गरेको सल्लाहको नतिजा अहिलेको सहाराको स्वरुप हो, एकेडेमिको अनुहार हो र क्लवका पारदर्शि गतिविधिहरु नै हुन ।
अहिलेको अवस्थामा आउँछौं भन्ने त थिएन तर एउटा टीम वर्कका बसेर काम गर्ने, सहकार्य गर्ने परिपाटी र दृढ संकल्पको कारण अनि स्वयंसेवी भावनाले यहाँसम्म ल्याई पुर्याएको हो । काम गर्दै जाँदा कामले काम सिकाउने रहेछ । हामीसंग व्यक्ति, संघ, संस्थाले गरेको हातेमालोको परिणाम हो, अहिले सहारा जहाँ उभिएको छ । स्थापना देखिको निरन्तरताले हामीलाई आत्म सन्तुष्टि दिने काम र जाँगर चलाउने काम गरिरहेको छ । “मरेर के लानु छ र ? जन्मेपछि केहि गरे पो समाजले हेर्छ” भन्ने मान्यताले अझैं गाडी वढ्ने प्रेरणाा दिईरहेको छ ।”
कहिलेकाँहि सोच्दा “यता नलागेर कतै अन्य पेशा व्यवसायमा लागेको भए करोडपछि भईन्थ्यो होला, नेता वा जागिरे भईन्थ्यो होला । परिवारमा अर्थका बारेमा घरायसी कुराहरु आउँछन् त्यो स्वाभाविक नै हो किनभने आर्थिक कुरामा धेरै पछाडी परियो । यसलाई थाँति राखेर क्लवका लागि लागियो २०५८ मा क्याराभान फुटवल पहिलो पटक आयोजना गरेपछि २०५९ सालदेखि आहा तथा रारा तयारी चाउचाउको उत्पादक हिमश्री फुड्स प्रा.लीले साथ दिन आयो जो अहिलेसम्म निरन्तरता दिईरहनुले हामीले ठीक ठाउँमा हात हालेका रहेछौं भनेर गर्व लाग्छ ।”
सहाराको नेपाली फुटवलमा दिएको योगदान १९ वर्षदेखिको लगनशिलता राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय भएको छ । हामीले उत्पादन गरेका खेलाडीले देशको क्याप्टेनसिप पनि गरे । जस्तो अनिल गुरुङ कै कुरा गरौं न, हाम्रै उत्पदान हुन, उनको बारेमा धेरै के बताउनु र सबैलाई थाहा छ ।
दोविल्लामा हामीले एकेडेमि शुरु गर्यौं । हाम्रो मक्सद आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वालकहरुको खोजि, उनिहरुको शिक्षा, दिक्षा, आवास र खेलकुदका महानहस्तिहरु तयार गर्न सहारा फुटवल एकेडेमिको स्थापना गर्यौं ।
केहि दिन अगाडीको कुरा हो । वेलायतमा नेपाली टीमलाई मैत्री खेलको लागि लैजाने कुरा भयो । यसका लागि लरेन्स आउनु भयो । उहाँ वेलायतको लिग कमिटिको संयोजक पनि, उहाँले फुटवलको लागि ५४ वर्ष बिताई सक्नु भएको रहेछ । उहाँले एकेडेमीको बारेमा बोलेको कुरा थियो :“यस्तो त संभव नै छैन, सोचकै थिएन, कसरी गर्नुभयो ? भनेर सोध्नुभयो । हामीलाई लाग्यो उहाँको त्यो बोलिले हामीले राष्ट्रमा मात्र नभई अन्तराष्ट्रमा पनि नेपालको सन्देश दिन सकेका रहेछौं भनेर खुसि लागेको छ र हौसला वढेको छ ।”
नेपालमा फुटवल खेलको खोजि गर्नुपर्यो भने उपत्यका बाहिर सहारा क्लव नै हो निरन्तर १९ वर्ष अगाडीदेखि फुटवलका लागि लागिरहेको छ । उता पूर्वमा वुढा सुव्वा गोल्ड कप पनि छ । बितेका दुई दशकमा यो बिचमा ठाउँ ठाउँमा अन्य क्लवहरु पनि जन्मिए, उनिहरुले हामीसंग गरे र राम्रैसंग फुटवल खेलाउँदै आउनुभएको छ ।
हामीलाई सहज किसिमको वातावरण अहिलेसम्म मिलेन । राज्यको नीति नियम राम्रो छैन । ६ महिना अगाडी खेल आयोजनाको डेट माग्दाखेरि पाउन नसक्दा कतिपय विदेशबाट आउने सहयोग आउन सकेको छैन । सहयोगसहित आउन चाहने दाताहरुको क्यालेण्डर मिलाउन निकै गाह्रो भएको छ र सहयोगबाट बिमुख हुनुपरेको छ ।
अब हामीलाई आफुले पाईरहेको स्तर, उचाईलाई बचाई रहने हो । हाम्रो चाहना त प्रतियोगिता सार्क स्तरीय गरौं भन्ने हो । अहिलेसम्म लगातार व्यवस्थित रंगशालाको माग गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल रंगशाला बनेको छ । रंगशाला १ अर्ब ३० करोडमा बन्दैछ । अब रंगशालामा सार्क स्तरको प्रतियोगिता गर्न सक्छौं तर हामीलाई जिल्ला खेलकुद, क्षेत्रीय खेलकुद, अखिल नेपाल फुटवल संघ, खेलकुद परिषद, मन्त्रालयले हातेमाले गर्नुपर्छ । “भविष्यमा हामी सार्क स्तरीय फुटवल गर्न सक्छौं ।” पोखरालाई फुटवलको माध्यमबाट चिनाउन मद्दत पुग्छ । हामीले भन्दै आयौं र १० वर्ष पनि भई सक्यो कि “खेलकुदको विकासमा सहकार्य गरौं, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन शहरको रुपमा स्थापित गरौं”, यो लगायत हाम्रा धेरै उदेश्यहरु छन् । फुटवलबाट कठिन परिस्थिति र विपन्न वर्गका वालकलाई आश्रित गर्ने, खेलाडी उत्पादन गर्ने, पोखरामा पर्यटकलाई भित्र्याउने र आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने हो ।
फुटवलको लागि हाम्रा विदेशमा रहेका क्लव सहारा यूके, सहारा हङकङ र साहरा अष्ट्रेलिया बलिया खम्वा हुन । २००८ मा पहिलो सहारा यूके खुल्यो, जहाँ म पनि गएको थिएँ । सरकारको एक रुपैया सहयोग नपाई हामीले एकेडेमि सुरु गरयौं । उहाँहरुले एकेकडेमिको लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । सहारा यूकेका तत्कालिन अध्यक्ष नविन गुरङको टीमले काम गर्यो । उपाध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ आर्थिक संयोजक भएर काम गर्नुभयो र ७४ लाख रुपैया आयो । हङकङमा दीपक गुरुङ संस्थापक अध्यक्ष । साथीहरुको सहयोगबाट ३० लाखको सहयोग आयो र एकेडेमि बनाउन हिम्मत आयो । पोखराबाट उत्तिकै सहयोग हुने नै भयो, जो आफ्नै खाईखेलेको थलो हो ।
यूकेमा अहिले विभिन्न प्रतियोगिता गर्ने र एकेडेमिको सुरसारमा सहारा यूके । उता हङकङमा बच्चाहरुलाई फुटवल खेलाउने काम भईरहेको छ । हामी भन्दा त हाम्रा ब्रान्चहरुले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, थकालीले हाँस्दै भन्नुभयो ।
फागुन २२ बाट चैत्र १ सम्म आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताले पर्यटन वर्ष २०२० लाई ठूलो सहयोग गर्नेछ । विदेशका दुई टीम र नेपालका चर्चित क्लवहरु आउँदैछन् भने उनिहरुको साथमा पारिवारीक जमघट हुने यो एउटा मौका पनि हो ।
क्लवको सफलताको लागि हाम्रा अग्रजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । अग्रज, वसन्त थकाली संस्थापक अध्यक्ष र अविभावक हो । रामचन्द्र गुरुङ, जयलाल पुन, विष्णु वास्तोला लगायतको योगदान छ, जसलाई हामीले भुल्न सक्दैनौं । अहले पनि उहाँहरुको सरसल्लाहमा काम गर्दै आएका छौं ।
“एउटा व्यक्तिले संस्थालाई कहिल्यै चलाउन सक्दैन, यसको लागि टीम वर्क आवस्यक पर्छ, यसमा हामी १९ वर्षपछि पनि उत्तिकै सतर्कतासाथ काम गरिरहेका छौं ।” अर्को कुुरा यसमा सबैभन्दा ठूलो सहयोगका हकदार पोखराका मिडिया पनि हुन भन्न मलाई अफ्ठेरो लाग्दैन ।